Tongasoa Eto Amin’ny “Hunger Games” Amin’ny Lalao Olaimpika – Sotchi – Rosia 2014 · Global Voices teny Malagasy
Tongasoa Eto Amin'ny “Hunger Games” Amin'ny Lalao Olaimpika – Sotchi – Rosia 2014
Voadika ny 14 Febroary 2014 23:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, English
Ny floha Putin tamin'ny lanonam-panokafana ny Lalao Olaimpika Sochi . Sary tsy nisy anaran'ny tompony hita tety anaty aterineto.
Raha efa nanomboka lefilefy ny “sangy ratsy momba ny toeram-pivoahana” [tatitry ny Global Voices ] sy ny tenifototra #SochiProblems, dia miala any indray ny fomba iray hafa enti-maneso ny fomba fandraisan'i Rosia ny Lalaon'ny Andro Ririnina: fanoharana ny Lalao Olaimpika sy ilay asa kanto, taharon-javatra telo, ny “Hunger Games” (Lalaon'ny Hanoanana).
Manasongadina mpitarika mpanao jadona iray ny “Hunger Games”, ny Filoha Snow, izay mihazona ny fifehezana firenena tanora iray amin'ny fanereny ireo tanorany hifaninana anaty seho alefa amin'ny fahitalavitra ka tsy misy afa-tsy iray ihany no afaka hivoaka velona aminy. Mazava loatra, eo am-panatanterahana azy, ny Lalao Olaimpika dia manana endrika mitovitovy amin'ny herisetra hita amin'io kisarisarin-dalaom-pahafatesana io. Afa-tsy ny hoe, tsy mifamono ireo Olaimpiana mpandray anjara mba hahazoany ny medaly volamena.
Kanefa, nisy akony teny anivon'ireo mpampiasa aterineto ny fanafangaroana ny teny hoe “Lalao” amin'ny endrika hentitry ny Filoha Putin (indrindra fa hatramin'ny làzany hoe mpitarika tsy refesi-mandidy) — ampy nampiteraka sary maro fanadrohadroana nampiasàna an'i Putin ho lafika narahana fitanisàna tenin'ny Filoha Snow. Sary iray isan'ny fantatry ny maro ilay iray misy an'i Putin miaraka amin'ny fehezanteny hoe “Tongasoa. Manaova Lalao “Hunger Games” Mahafinaritra [ianareo.]” napetraka eo ambonin'ilay sary :
“Tongasoa. Manaova Lalao “Hunger Games” Mahafinaritra”. Sary tsy nisy anaran'ny tompony hita tety anaty aterineto.
Ireo sary mahatsikaiky hafa dia mifantoka aminà endrika hafan'ny “Hunger Games”. Eto dia ny fitafin'ireo mpandray anjara avy amin'ny ampahany eo amin'ny fitondràna no hita mirentirenty sy tsikaritra ho kidaladala ary tsy misy lanjany toy ny an'ny sarangan'ny mpiasa ao amin'ity firenena nofinofy ity. Sary malaza amin'izao fotoana miely ao amin'ny Twitter ny iray ahitàna vehivavy mitondra takelaka misy ny anaran'ireo firenena nandritry ny lanonam-panokafana, nampifanakaikezina tamin'ny sarin'ny mpilalao avy ao amin'ilay sarimihetsika “Hunger Games” nivoaka vao haingana, izay mitondra fitafy mitovitovy amin'ny lazaina hoe rétro-futuriste:
Mpilalao ao amin'ny sarimihetsika “Hunger Games” (ankavia), ary lasibika milanja ny takelaka Arzantina tamin'ny lanonam-panokafana (ankavanana). Sary tsy nisy anaran'ny tompony hita tety anaty aterineto.
Misy dikany lalina ao ambadik'ireny fanoharana ireny — ny Sochi Games (Lalao Olaimpika), izay vinavinaina ho nandaniana maherin'ny 40 lavitrisa dolara amerikana, dia tsy nitsahatra notefotefohan'ny filazana azy ho feno kolikoly [tatitry ny Global Voices], tontolon'asa mahatsiravina sy tsy fandoavana ny karaman'ireo azo ertreretina ho mpiasa tsy ara-dalàna. Ny fiheverana ny fisian'ny saranga ambany, miaina mahita ny zava-doza anatin'ny fakon'ny “Capitol”, dia azonao raisina ho toy ny fanehoana an-tsary ho hita maso ireo mahantra sy anjorom-bàla ao Rosia mitazana ireo Lalao faran'izay nandaniam-bola be indrindra teo amin'ny tantara mitranga eo ambanin'ny masony nefa tsy hitany hatao ahoana, tsy takany. Olona iray mpampiasa Twitter no nanoratra hoe :
Ну правда. Один хуй,народ голодает и нищает,а правительство радуется
— Yana Makarova (@Makarova17) February 9, 2014
Marina io. T*y toy ny teo ihany, ny olona mitohy miha-mahantra sy noana, raha ny governemanta kosa ravoravo mifety
Mpampiasa iray hafa no nisoroka ny fampiasàna zavatra saro-takarina ka naka ny fanoharana tamin'ny fanaovany fampitahàna:
Игры голодных,как Олимпиаду, контролируют власти,чтобы развлечь рабов и сохранить вечного президента-всех несогласных убивают беспощадно! — Rouslan (@Rouslan5) February 8, 2014
Ny Hunger Games, toy ny Lalao Olaimpika ihany, dia ny manampahefana no mifehy azy, mba handrebirebena ny andevo sy hitazonana ny maha-filoha mandra-maty — ireo rehetra tsy miombon-kevitra dia vonoina tsy misy indrafo!
Tsy ny fampitahàna rehefa no manana fijery miiba — ny ankamaroan'ireo bilaogera dia naka fomba fijery mananihany. Iray mpampiasa Twitter no nihanihany nanoso-kevitra hoe tokony hihatsara ny Lalao Olaimpika raha toa ry zareo mitodika mankany amin'ny Hunger Games natao ho an'ireo manampahefan'ny governemanta :
Лучше бы вместо этой олимпиады устроили голодные игры..между депутатами.
— Andrey Kostov (@Lemur_Bandito) February 8, 2014
Mety ho tsara kokoa raha toa ka ny Hunger Games no apetrak'izy ireo eo amin'ny toeran'ny Lalao Olaimpika an … hifaninanan'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta.
Amin'ny lafiny sasany, ity karazana fomba fijery mivantambantana natao hanalàna azy momba ny Lalao Olaimpika ity dia toy ny rivotra madio mitaha amin'ny sasany amin'ireo sary manàla azy somary mahery setra [tatitry ny Global Voices ] navoaka hatramin'izao. Mandritra izany fotoana izany, ny RuNet dia nanjary sehatra nifanjevoan'ny lahatsoratra isankarazany mampiasa loha manakiana ny Sochi, sy lahatsoratra manakiana ireo kiana, mandra-pahatongan'ny tena fotoana marina hanombohan'ny Lalao Olaimpika, tsy difotra tanterak'ireny kiana aman-taonina ireny akory ny maha-atleta sy ny rehareham-pirenana.
3 andro izayRosia
4 andro izayOkraina
2 herinandro izayBosnia Herzegovina
Nitondra sento, fitsipahana didim-pitsarana farany mihatra tamin'ilay jiolahin'ady Ratko Mladic fa tsy nampikatona ny raharaha